Global Voices teny Malagasy » Mihevitra Hampiditra Ny ISIS Ho Ao Anatin’ny Lisitry ny “Fikambanana Tsy Miankina Tsy Iriana” Ny Mpanao Lalàna Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Novambra 2015 4:51 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanampenam-bava, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Manasa ny olona hametraka fanontaniana ny Open Russia (Rosia Misokatra) an'i Maria Baronova. Nahazo fandrahonana noho ny tsy maha ara-dalàna azy ny fikambanana sivikany ao Rosia. (Lahatsoratra nadikan'i Kevin Rothrock ho amin'ny teny anglisy). Sary: Facebook.
Manana lisitra ofisialy izay antsoiny hoe “fikambanana tsy iriana” ny governemanta Rosiana. Lazaina fa mandrahona ny “filaminan'ny foto-dalàmpanorenana, ny fahafahany miaro, na ny fiarovam-pirenena” ny vondrona rehetra ao anatin'izany lisitra izany. Rehefa lasa ‘”tsy iriana” ny fikambanana iray dia voatery tsy maintsy manakatona ny asany rehetra ao Rosia, ary miatrika fiampangana heloka bevava ireo mpiasa ao aminy raha tsy mahita asa vaovao. Mety miditra am-ponja hatramin'ny enin-taona an-tranomaizina ny filohan'ny fikambanana.
Hatramin'izao, fikambanana iray monja  no nataon'ny manampahefana Rosiana ao anaty lisitra “tsy iriana” : ny Fanohanam-pirenena ho an'ny Demaokrasia (NED), vondrona tsy mitady tombotsoa ara-bola vatsin'ny Kongresy Amerikana ara-bola. Ny Lehiben'ny fampanoavana sy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny no tompon'andraikitra amin'ny fanapahana izay vondrona ampidirina ao anaty lisitra, izay nampiantranoana sy nampiharan'ny minisitry ny fitsarana ny lalàna. (Azo jerena ao amin'ny aterineto ato ny lisitra.
Na dia tsy manana fahefana ara-dalàna hametraka vondrona ho “tsy iriana” aza izy ireo, dia mbola niezaka nandray anjara tamin'izany ihany ireo mpanao lalàna Rosiana, mangataka amin'ny Lehiben'ny Fampanoavana sy ny Minisiteran'ny Fitsarana mba hanampy vondrona am-polony mahery. (Fanamarihana ho an'ny mpamaky: iray amin'ireo vondrona ao anatin'ny lisitry ny mpanao lalàna ny Open Society Foundation , izay mamatsy vola ny RuNet Echo.) Nanoratra taratasy ireo vondrona solombavambahoaka ao amin'ny Duma, antenimieram-pirenena ao Rosia, ary namolavola ny “lisitra-farany” tsy ofisialy azy manokana ny komity ao amin'ny Filankevitry ny Federasiona.
Tamin'ny 27 Oktobra, nilaza tamin'ny gazety Izvestia mpomba ny Kremlin ireo loharanom-baovao fa manomana tovana vaovao ao anatin'ny “lisitra-farany” azy ireo ireo loholona, anisan'izany ny Ford Foundation (izay nanakatona ny biraony ao Moskoa tamin'ny taona 2009), ny Jamestown Foundation , ary vondrona vaovao Open Russia an'i Mikhail Khodorkovsky. Mahagaga fa misy ihany koa ny resaka fampidirana ny ISIS, vondrona milisy sy milaza tena fa fanjakana Silamo sy Kalifà, izay efa voarara ao Rosia amin'ny maha-fikambanana mahery fihetsika azy.
Ny fampidirana ny vondrona jihadista ao anaty lisitra feno fikambanana mampiroborobo ny demaokrasia tarihin'i Etazonia dia mety mandefa hafatra mahery vaika, mampitovy ny fampihorohoroana ny zavatra tahaka ny vatsim-pianarana ho an'ny mpikatroka sy ny mpanao gazety.
Tsy misy herin-dalàna ny “lisitra-farany” avy amin'ny Filakevitry ny Federasiona, na izany aza, ny NED no tena “tsy iriana” tsy ara-dalàna indrindra ao Rosia. Na izany aza, mampanahy be ihany raha tafalatsaka ao anatin'ny “lisitra-farany”, manoloana ny fitakian'ny senatera fa miara-miasa akaiky mifampidinika amin'ny Lehiben'ny Fampanoavana sy ireo manampahefana hafa izy ireo. Raha manaiky tokoa handràra izay vondrona ao anatin'ny lisitry ny Antenimieran-doholona ny polisy, dia mety hanimba ny ezaka sivikan'ny fikambanana ao Rosia izany .
Manoloana izany fandrahonana izany, mety hahita ireo mpiasa ao amin'ireny fikambanana ireny ho menatra imasom-bahoaka ianao ka manantena fa hanadino azy ireo ny manampahefana.
Tsy manao izany zavatra izany i Maria Baronova ao amin'ny Open Russia , izay monina ao Moskòa ary mandrindra ny tetikasan'ny fikambanana eny ifotony. Niboridana izy omaly mba hanaparitaka ny fivoriana ametraho fanontaniana aho  miaraka amin'ny habaka TheQuestion, izay naka tahaka am-pamazivaziana ilay sary miboridana namboarina NSFW  miaraka amin'i Lesya Ryabtseva (olo-malaza mampiady hevitra ao amin'ny radio Akon'i Moskoa) nivoaka vao haingana izy, ary nahasarika ny saina indray ny amin'ny mety handrarana ny mpampiasa anilan'ny ISIS.
Tao amin'ny Twitter, nametraka fanontaniana tsy matotra maromaro momba ny fitanjahany i Baronova, saingy nahazo fanontaniana an-kitsipo  maromaro ihany koa izy mikasika ny firehany ara-politika sy ny fahamendrehan'ny fikatrohana sivika ao Rosia ankehitriny.
Manoloana ny mety hampidirana ny fitaovany ao anatin'ny lisitra miaraka amin'ny ISIS, maneso ny fahitana fa mihantsy ady amin'ny raharaham-politika ivelany  kokoa i Baronova, manohana ny fanakambanana an'i Krimea amin'i Rosia, mametraka ny tsiny lehibe amin'i Kiev noho ny “ady an-trano” ao atsinanan'i Okraina, ary milaza fa “tsara” ny fitsabahan'i Rosia an-tsehatra ao Syria sy miverina amin'ny politikan'ny Fahefana Goavana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/03/76046/
 fikambanana iray monja: https://meduza.io/en/news/2015/07/28/national-endowment-for-democracy-becomes-first-undesirable-organization-in-russia
 nampiantranoana sy nampiharan'ny : http://minjust.ru/ru/press/news/opredelen-poryadok-vedeniya-perechnya-inostrannyh-i-mezhdunarodnyh-nepravitelstvennyh
 ato : http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted
 tovana vaovao : http://izvestia.ru/news/594027
 Open Russia: https://openrussia.org/
 fivoriana ametraho fanontaniana aho: https://www.facebook.com/thqstn/photos/a.635802706530835.1073741826.635795779864861/809176192526818/?type=3&permPage=1
 sary miboridana namboarina NSFW: http://podakuni.livejournal.com/794530.html
 fanontaniana an-kitsipo: https://www.facebook.com/maria.baronova/posts/1075181312494529
 raharaham-politika ivelany: http://otnoshenie-k-uchastiyu-rossii-v-vojne-v-sirii-na-donbasse-i-k-prisoedineniyu-kryma